जापानमा हुने युवतीको ब्यथा- ‘न श्रीमान छोड्न सक्छु, न अर्को बिहे गर्न सक्छु’ – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख ०५, २०७८ समय: १३:२२:०१
१८ वर्षको उमेरमा मेरो विवाह भयो। केही आफ्ना रहर र केही बाध्यताका बीच म बिहेलगत्तै जापान आउनु प-यो। हेर्दाहेर्दै कतिबेला साढे चार वर्ष बित्यो, पत्तै भएन।
त्यसरी अरु केटीहरुसँग हिँडेर के हुन्छ ? मेरो हृदय दुखाएर, मलाई रुवाएर के पाउनुहुन्छ ? बरु कुनै केटी मन परेको हो भने
अरुसँग मैले बिहे गरेँ भने पनि म नयाँ बूढोलाई उसलाई जस्तो माया गर्न सक्तिनँ जस्तो लाग्छ। म के र कसो गरौँको अवस्थामा छु।